Olee otú dehumidifiers-arụ ọrụ?
Dehumidifiers wepụ mmiri si ikuku na-etinye ya n'ime a jụụ na okpomọkụ Exchanger nke nwere ike mbụ gbanwee ikuku na Alụlụụ site kpo oku. Na-eme ka ahụ Alụlụụ ebikọta na condensing tube. N'ikpeazụ, ghọọ mmanụ mmiri bụ wepụ ya site na agwụ duct.
My dehumidifier adịghị arụ ọrụ, ihe m nwere ike ime?
1). Lelee okpomọkụ nso na-eme ka n'aka na nkwụnye e etinyere n'ụzọ ziri ezi.
2) .Visit www.alorairsolutions.com na-abanye na Free Registration FAQ usoro ka aha gị ajụjụ. Anyị na-ejere ngalaba ga-kpọtụrụ gị na-enye ihe ngwọta ozugbo.
3). I nwekwara ike izipu ihe e-mail na AlorAir Service Department site na adreesị sales@alorair.com maka ozi ndị ọzọ. Ma ọ bụ i nwere ike ịkpọtụrụ obodo nkesa ma ọ bụ AlorAir Service Department na 888-990-7469 n'ihi na ihe ọmụma
Gịnị ka m kwesịrị ime na oké ụzụ mgbe unit ọrụ?
Firstly, jide n'aka na unit na-arụ ọrụ na ewepụghị na ike n'ala. Nke abuo, na-elele nyo ntupu iji jide n'aka na ọ na-adịghị nnukota onu. Ọ bụrụ na nyo ntupu na-nnukota onu, biko na-ya ma dị ọcha.
M na-na ụdị ụfọdụ nke readout koodu na m akara panel. Olee ebe m pụrụ ịchọta a ndepụta njehie codes?
Error codes nwere ike a hụrụ si nwe 'ntuziaka (nwekwara dị na www.alorairsolutions.com n'okpuru Product ego, Akwụkwọ ntuziaka). N'ihi na ndị ọzọ obi abụọ, biko na-enye anyị a oku na-aga na 888-990-7469.
Gịnị bụ ọrụ ndụ nke AlorAir dehumidifier?
The unit ozi ndụ pụrụ 8 afọ ma ọ bụ karịa na ọtụtụ ndị ọzọ ikpe.
Gịnị nchekwa certifications (OA, ETL, CSA, wdg) na-AlorAir ngwaahịa na-ebu?
Ụfọdụ n'ime anyị ụdị-ebu ETL, OA na Energy Star asambodo.
Olee ebe m pụrụ ịchọta akwụkwọ ntuziaka maka m AlorAir akụrụngwa?
Ị nwere ike ịchọta printable ntuziaka na anyị website. Ọ bụrụ na ị na-enweghị ike ibudata ya, kpọtụrụ AlorAir Service Department na 888-990-7469. Anyị nwere ike Fax ma ọ bụ email gị a nnọchi na ọ na-elekọta.
È nwere oké egwu isi n'ihi dehumidifier nchekwa oyi?
Tupu ịchekwa dehumidifiers na oyi, jide n'aka na niile mmiri na-ṅụsịa si unit. Ọzọkwa, na-ahụ na mmiri na igbapu tube e ṅụsịa iji gbochie cracking. The nkeji na-bụghị weatherized, ya mere ha enweghị ike enịm n'èzí.
Ebe m ga-esi m AlorAir ngwaahịa serviced?
Ọtụtụ mgbe gị unit nwere ike serviced site a gbaara HVAC ẹkesikpede; ị nwekwara ike ịnapụta ndị unit azụ anyị maka ọrụ. Biko na-akpọ anyị na 888-990-7469 ịmata otú malite usoro.
Gịnị bụ AlorAir nloghachi iwu?
Biko rụtụ aka na AlorAir nloghachi iwu na website www.alorairsolutions.com.
Olee otú m ga ụgbọ mmiri m ngwá?
Anyị na-akwado mbupu na unit site FedEx Express nchekwa.